TINYE MA Ọ BỤ WEPỤ MMEMME NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Tinye ma ọ bụ Wepụ Mmemme na Windows 10
Ndị ọkwọ ụgbọala bụ mmemme na-enweghị ike ịrụ ọrụ nkịtị nke ihe ọ bụla e ji ejikọta na kọmpụta agaghị ekwe omume. Ha nwere ike ịbụ akụkụ nke Windows ma ọ bụ arụnyere na sistemụ ahụ site n'èzí. N'okpuru ebe a, anyị na-akọwa ụzọ ndị dị mkpa iji wụnye ngwanrọ maka ụdị mpempe akwụkwọ Samsung ML 1641.
Software nkwụnye maka mpempe akwụkwọ ML 1641
Download ma wụnye ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ anyị, anyị nwere ike iji ụzọ dịgasị iche. Ihe kachasị mkpa bụ iji aka na-achọ faịlụ na ibe akwụkwọ ọrụ nke ndị ọrụ ndị ahịa wee dezie ha na PC. Enwere nhọrọ ndị ọzọ, ma akwụkwọ ntuziaka ma akpaka.
Usoro 1: Nkwado ndị ọrụ nkwado
Taa, ọnọdụ dị otú a dị na Hewlett-Packard nyere nkwado nke ndị ọrụ nke ngwaahịa Samsung. Nke a metụtara ndị na-ebi akwụkwọ, scanners na ngwaọrụ multifunction, nke pụtara na ndị ọkwọ ụgbọala ga-aga na ebe nrụọrụ weebụ HP ọrụ.
Download ọkwọ ụgbọala site na HP
Mgbe ị gara na saịtị ahụ, anyị na-eleba anya ma usoro ahụ arụnyere na kọmputa anyị bụ nke a kọwara n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụrụ na data ezighi ezi, mgbe ahụ, ịchọrọ ịhọrọ nhọrọ gị. Iji mee nke a, pịa "Gbanwee" na os nhọrọ nke os.
Ịgbasawanye ndepụta nke ọ bụla, anyị na-ahụ nsụgharị anyị na ike usoro, mgbe nke a gasịrị, anyị na-etinye mgbanwe site na iji bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Usoro ihe omume ahụ ga-egosipụta nsonaazụ ọchụchọ nke anyị na-ahọrọ ngọngọ na kuki ngwa, na n'ime ya anyị na-emeghe nkeji na ndị ọkwọ ụgbọala bụ isi.
N'ọtụtụ ọnọdụ, ndepụta ahụ ga-agụnye ọtụtụ nhọrọ - ọ bụ mgbe niile ọkwọ ụgbọala zuru ụwa ọnụ, ma, ọ bụrụ na ọ dị adị, ọ dị iche maka OS gị.
Anyị na-etinye na ngwugwu ahọrọ maka nbudata.
Ọzọkwa, dabere na onye ọkwọ ụgbọala anyị natara, ụzọ abụọ ga-ekwe omume.
Samsung Universal Driver Driver
Gbaa installer site na ịpị abụọ na ya. Na windo na-egosi, kaa ihe ahụ "Echichi".
Anyị na-enyocha naanị igbe nlele, si otú ahụ na-anabata usoro ikike.
Na mmalite window nke usoro ihe omume ahụ, họrọ otu nhọrọ ntinye site na atọ ahụ. Abụọ abụọ chọrọ ka onye nbipute ahụ jikọọ na kọmpụta, nke atọ na-enye gị ohere ịwụnye naanị ọkwọ ụgbọala.
Mgbe ị wụnye ngwaọrụ ọhụrụ, nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ usoro njikọ - USB, wired ma ọ bụ ikuku.
Lelee igbe nke na-enye gị ohere ịhazi ntọala netwọk na nzọụkwụ ọzọ.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, debe igbe nlele ahụ n'ime igbe nchịkọta a kapịrị ọnụ, gụnyere ike iji aka hazie IP, maọbụ mee ihe ọ bụla, ma gaa n'ihu.
Nchọgharị maka ngwaọrụ ejikọrọ amalite. Ọ bụrụ na anyị wụnye ọkwọ ụgbọala maka onye na-arụ ọrụ, ma ọ bụrụ na anyị emee ntọala netwọk, anyị ga-ahụ window a ozugbo.
Mgbe onye nyocha ahụ chọtara ngwaọrụ ahụ, họrọ ya wee pịa "Na-esote" ịmalite na-edegharị faịlụ.
Ọ bụrụ na anyị ahọrọ nhọrọ ikpeazụ na windo mbido, mgbe ahụ nzọụkwụ ọzọ ga-abụ ịhọrọ ọrụ ndị ọzọ ma malite nrụnye.
Anyị pịa "Emere" mgbe emechara nwụnye.
Ọkwọ ụgbọala gị os
Ntinye nke nchịkọta ndị a dị mfe, n'ihi na ọ chọghị ka mmezi ọrụ site na onye ọrụ.
Mgbe ịmalite, anyị na-achọpụta ohere disk iji wepu faịlụ. N'ebe a, ị nwere ike ịhapụ ụzọ nke onye na-enyocha chọrọ, ma ọ bụ denye aha gị.
Ọzọ, họrọ asụsụ.
Na windo na-esote, hapụ ntụgharị ahụ na-esote ihe nrụnye ahụ.
Ọ bụrụ na achọpụtaghị onye na-ebi akwụkwọ (ejikọghị ya na usoro ahụ), ozi ga-apụta, nke anyị gụrụ "Mba". Ọ bụrụ na ejikọrọ ngwaọrụ ahụ, nrụnye ga-amalite ozugbo.
Mechie bọtịnụ nhazi ahụ na bọtịnụ ahụ "Emere".
Mmemme ndị na-enyocha usoro maka ndị ọkwọ ụgbọala oge ochie ma mee ka ha kwenye maka mmelite, na mgbe ụfọdụ, ha nwere ike ibudata ma wụnye nchịkọta ndị dị mkpa n'onwe ha, na-ejikarị ya na Ịntanetị. Ikekwe, otu n'ime ndị nnọchiteanya kachasị amara na a pụrụ ịdabere na ya bụ DriverPack Solution, nke nwere ọrụ niile dị mkpa na nnukwu nchekwa faịlụ na sava ya.
Gụkwuo: Otu esi emelite ndị ọkwọ ụgbọala site na iji DriverPack Solution
Usoro 3: Ngwongwo ID
ID bụ ihe nchọpụta nke akọwapụtara ngwaọrụ ahụ na usoro. Ọ bụrụ na ị maara nke a, ịnwere ike ịchọta ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị na iji ihe pụrụ iche na Ịntanetị. Usoro maka ngwaọrụ anyị yiri nke a:
Usoro 4: Windows Ngwaọrụ
Sistemụ arụmọrụ nwere ngwá ọrụ nke aka ya maka ijikwa mpempe akwụkwọ. Ọ gụnyere usoro mmemme - "Master" na nchekwa nke ndị ọkwọ ụgbọala bụ isi. Okwesiri iburu n'uche na ndi nchikota ndi anyi choro di na Windows no na Vista.
Meghee menu mmalite ma gaa na ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Malite ntinye nke ngwaọrụ ọhụrụ.
Họrọ nhọrọ mbu - onye nbipute mpaghara.
Anyị na-ahazi ụdị ọdụ ụgbọ mmiri nke gụnyere ngwaọrụ (ma ọ bụ ka ga-etinye ya).
Na-esote, họrọ onye nrụpụta na ihe nlereanya.
Nye ngwaọrụ ahụ aha ma ọ bụ hapụ mbụ.
Window na-esote nwere ntọala maka ịkekọrịta. Ọ bụrụ na achọrọ, tinye data na ubi ma ọ bụ machibido ịkekọrịta.
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ ịpịpụta akwụkwọ nyocha, dozie ndabara ma mezue nwụnye.
Meghee oghere njikwa mpaghara na bọtịnụ "Ndị na-ebi akwụkwọ na Faksị" na menu "Malite".
Gbaa ọsọ "Nna-ukwu" jiri njikọ gosipụtara na ọnụ ọgụgụ dị n'okpuru ebe a.
Na windo na-esote, pịa "Na-esote".
Wepu ihe nlele ahụ na-esote nyocha akpaka maka ngwaọrụ wee pịa ọzọ. "Na-esote".
Hazie ụdị njikọ.
Anyị na-ahụ onye mepụtara (Samsung) na onye ọkwọ ụgbọala nke aha nke ihe nlereanya anyị.
Anyị kpebisiri ike na aha onye nbipụta ọhụrụ ahụ.
Anyị na-ebipụta akwụkwọ ule ma ọ bụ na anyị na-ajụ usoro a.
Mechie windo "Nna ukwu".
Taa, anyị maara nhọrọ anọ maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka mpempe akwụkwọ Samsung ML 1641. Iji zere nsogbu ndị nwere ike, ọ ka mma iji usoro mbụ. Software iji mezie usoro ahụ, n'aka nke ya, ga-azọpụta ụfọdụ oge na mgbalị.